Kooxda Liverpool Ayaa Ka Qiimo Badan Sadexda Koox Ee Real Madrid, PSG Iyo Bayern Munich KPMG
HomeWararka CiyaarahaKooxda Liverpool ayaa ka qiimo badan Sadexda Koox ee Real Madrid, PSG iyo Bayern Munich KPMG
January 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain 0
Kooxda ku guuleysatay Premier League ayaa ka qiimo badan kooxaha ugu sareeya shanta horyaal ee ugu fiican Yurub, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Iyada oo taageerada dhaqaale ee kubbadda cagta maalmahan uu hooseeyo , ciyaartooyda ugu sarreysa ayaa loo bartay in ay arkaan kororka suuqooda.
Shirkadda xisaabaadka adduunka ee KPMG ayaa falanqeeysay kooxdii ugu dambeysay ee hanatay lixda horyaal ee ugu waa weyn Yurub – Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Liga NOS iyo Ligue 1 – si ay u qiimeeyaan qiimaha kooxda.
Horyaalka Ingriiska, Liverpool ayaa loo xushay ka dib ololahoodii rikoodhka ahaa ee ay dhigtay markii ugu dambaysay taas oo u aragtay iyaga oo kor u qaadaya Premier League markii ugu horaysay muddo 30 sano ah.
Wadada Reds waxaa hogaaminaya Mohamed Salah, kaasoo haysta qiimo dhan 122.2 milyan ginni, taasoo ka dhigeysa inuu yahay ciyaaryahanka seddexaad ee ugu qiimaha badan mid ka mid ah lixda naadi ee la xushay.
Salah waxaa ku xiga Sadio Mane, kaasoo kaliya ka dambeeya ninka reer Masar iyadoo lagu qiimeeyo m 120m, halka daafaca Trent Alexander-Arnold uu dhameystirayo seddexda ugu sareysa kooxda Jurgen Klopp.
Sida laga soo xigtay warbixinta, kooxda Klopp waxay heystaan ​​qiime guud oo ah 9 1.09billion.
Spain gudaheeda, kooxda heysata horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkii hore Real Madrid ayaa si aad ah uga qiimo yar Reds kooxdooda, sida lagu sheegay warbixinta, wadar ahaan wadar ahaan waa 4 874.2m.
Casemiro waa ciyaaryahanka ugu qiimaha badan Los Blancos oo lagu iibsado .6 72.6m, iyadoo Raphael Varane lagu qiimeeyay € 70.2m isagoo ka horeeya goolhayaha ugu qaalisan liiska, Thibaut Cortois, oo lagu qiimeeyo .9 67.9m.
Juventus sidoo kale waxay leedahay koox ka qiimo yar Liverpool, iyadoo kooxda difaacaneysa Serie A ay heysato wadar ahaan € 734.8m.
Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta seddexaad uga jira Juve € 63.2m, iyadoo weeraryahanka reer Portugal uu 36 jirsaday bishii Febraayo. iyo Paulo Dybala € 65.2m,.
Jarmalka, Serge Gnabry waa ciyaaryahanka ugu qiimaha badan Bayern Munich ka dib xilli ciyaareedkoodii cajiibka ahaa ee xilli ciyaareedkii hore.
Gnabry wuxuu door weyn ka ciyaaray guushii Bayern ee Champions League wuxuuna kasbaday qiimo dhan .8 99.8m, Joshua Kimmich oo ku fadhiya .3 98.3m iyo Leroy Sane oo ku fadhiya 85.8m ah, ayaa ka caawiyay kooxda Hansi Flick inay gaarto qiime dhan € 943.4m.
Layaab malahan, kooxda heysata horyaalka La Liga NOS ee Porto ayaa heysata qiimeynta kooxeed ee ugu hooseysa lixda koox ee loo soo xushay daraasadda, iyadoo ku heshay 4 214.4m.
Saddexda xiddig ee ugu qiimaha badan kooxda reer Portugal ayaa kala ah Jesus Manuel Corona oo ku fadhiya .5 28.5m, Moussa Marega oo ku kacaya .4 15.4m iyo Shoya Nakajima oo at 14.3m.
Paris Saint-Germain ayaa ku faaneysa ciyaaryahanka ugu qiimaha badan liiska, iyadoo Kylian Mbappe uu diiwaan gaaray qiimo dhan € 200m suuqa hadda.
Weeraryahanka reer France waxaa ku xiga saaxiibkiis PSG Neymar Jr oo ku fadhiya € 125m, kaliya 8 2.8m oo ka horeya Salah, iyo Marquinhos oo ku jira booska seddexaad ee kooxda ka dhisan Paris ay heysato 59.9m.
Kooxda Mauricio Pochettino ayaa leh qiimeyn guud oo dhan € 806.6m, taasoo la micno ah in Liverpool ay heysato kooxda ugu qaalisan kubada cagta Yurub, sida lagu sheegay warbixinta.